dashain 2078(dashain 2078) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
भक्तपुर। दसैँका लागि मुस्ताङ हुँदै ल्याइएको च्याङ्ग्राको मूल्य यस वर्ष अत्यधिक बढेको छ। सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको १०८ रोपनी चौरमा २ हजार ५०० च्याङ्ग्रा र करिब २ हजार खसीबोका बिक्रीका लागि ल्याइएको छ। सोमबारदेखि खरिदका लागि ग्राहक आए पनि आज बिहानैदेखि च्याङ्ग्रा, खसी, बोका खरिद गर्नका लागि ग्राहकको भीड लागेको...
काठमाण्डौ । दसैँ मनाउन असोज महिनामा मात्रै झन्डै ९ लाख नागरिकले काठमाण्डौ उपत्यका छाडेका छन्। दसैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वमा घर जानेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। असोज महिनाको १ गतेबाट अहिलेसम्म उपत्यका छाड्नेको सङ्ख्या ९ लाख पुगेको र अझै बढ्ने देखिएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। यो वर्ष गत वर्षभन्दा दोब्बर यात्रु उपत्यकाबाट...
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो दशैं भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नैहरुबाट तिरस्कृत भएर वृद्धाश्रममा जीवन बिताइरहेका वृद्धवृद्धाको कथालाई भिडियोमा मार्मिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै कथाको अर्को पाटोमा अनाथहरुको आफन्तबिनाको निरश जीवनको चित्रण समेत गरिएको छ । कथाका यी दुई खालका पात्रहरुलाई एकैठाउँमा ल्याएर...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । गाउँघरमा दसैँको आगमनसँगै राजधानीबाट आफ्नो गाउँठाउँ फर्किने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। गाउँघरमा दसैँको चहलपहल निकै बढेको छ। खेतको आली–आलीमा धान झुलेको छ। बर्खाको हिलोसँगै पारिलो घामले पनि चाडपर्व आएको महसुस भएको छ। प्रदेशबाट लाहुरेहरु आउने क्रम पनि दिनदिनै बढेको छ। लिंगेपिङ र लठ्ठेपिङ बनाउने...
दसैँ विशेष: विदेश रहेका नेपालीको सुझाव– ‘दक्षिणाको पैसा सेयरमा लगानी गरौँ’
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । हरेक घरको कोही न कोही नेपाली सदस्य अध्ययन, रोजगारलगायत अन्य थुप्रै कारणले विदेश पलायन भएका छन्। कोरोनाले गर्दा पनि यसपालि विदेशमा रहेका धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी महान चाड दसैँ मनाउन वञ्चित हुने भएका छन्। ताप्लेजुङका सुवास अधिकारी विगत ५ वर्षदेखि मलेसियामा बस्दै आएका छन्। अधिकारी भन्छन्,...
दसैँका लागि ल्याइयो खसीबोका, भोलिबाट बेचिने
काठमाण्डौ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दसैँका लागि काठमाण्डौमा खसीबोका भित्र्याउन सुरु गरेको छ। कम्पनीले हिजो ५३१ खसीबोका ल्याएको छ। हेटौँडाबाट ३०२ र दाङबाट २२९ वटा खसीबोका ल्याइएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन्। ‘यसपालि २ हजार खसीबोका ल्याइनेछ’, उनले भनिन्, ‘बाँकी खसीबोका पनि ल्याउन...
एकरुपता ल्याउन मासुको मूल्य निर्धारण, अब खसी र कुखुराको प्रतिकेजी कति ?
काठमाण्डौ । मासु व्यवसायीहरुले दसैँका लागि खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन्। चाडपर्वको मौका छोपी आफूखुसी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका हुन्।आन्द्राभुडी राखिएको मासु प्रतिकिलो रु. १ हजार, बोसो राखिएकाको रु. १ हजार २०० र ह्याकुलासहित रोजाइ (ग्राहकले रोजेअनुसार)को मूल्य रु. १...
आजबाट बडादसैँ आरम्भ, घटस्थापनाको शुभसाइत बिहान ११ः४६ मा
काठमाण्डौ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नेपालीको महान् पर्व बडादसैँ आजदेखि सुरु भएको छ। यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। बडादसैँको पहिलो दिन आज घरघरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थापना गरिन्छ। पूजा कोठा वा दसैँ घरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री...
टेलिकमको सहकार्यमा नेपाल बैंकले ल्यायो पर्व अफर
काठमाण्डौ । २०७८ सालको बडादशैं, तिहार र छठको अवसरमा पारेर नेपाल बैंक लिमिटेडले दुईवटा विशेष सुविधासहितको बचत खाताहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल बैंकमा सो खाताहरु खोल्ने ग्राहकलाई विशेष सुविधाका प्याकेजहरु दिने गरी असोज २० गते नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल टेलिकमबीच एक सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा नेपाल टेलिकमका चिफ...
दसैँका लागि मकवानपुर र तुलसीपुरबाट २ हजार खसीबोका ल्याइँदै
काठमाण्डौ । दसैँलाई लक्षित गर्दै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २ हजार खसीबोका काठमाण्डौ ल्याउने भएको छ। घटस्थापनाको भोलिपल्टबाट बिक्री गर्ने योजना रहेको खसीबोका यसपटक मकवानपुर र तुलसीपुरबाट ल्याइँदैछ। ‘खसीबोका ल्याउने तयारी हुँदैछ’, कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदी भन्छिन्, ‘पोहोर साल १ हजार ५१०...
कुन देशमा दसैँको टीकाको साइत कति बजे ? (सूचीसहित)
काठमाण्डौ। अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि पनि दसैँको टीका लगाउने साइत तयार पारेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुले विजया दशमीको टीकाको साइतबारे जिज्ञासा राखिएकाले विभिन्न देशमा टीका लगाउने साइत तयार पारिएको समितिले जनाएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले विभिन्न देशमा दसैँको टीकाको साइत तय...
काठमाण्डौ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडादसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ। असोज २१ गते बिहीबार बिहान ११:४६ बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११:४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना...
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ। नेपालीको महान चाड दसैँ नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरुले राजधानीमा विभिन्न जिल्लाबाट खसीबोका ल्याउने क्रम सुरु भएको छ। अधिकांश खसीबोका पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी साथै पश्चिमको दाङ, सल्यान, सुर्खेतलगायत अन्य जिल्लाबाट राजधानीमा ल्याएर बिक्री–वितरण हुने गरेको छ। अहिले नेपालका विभिन्न जिल्ला साथै भारतबाट...